राजनीति Archives - Page 413 of 825 - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
काठमाडौँ, २९ पुस । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकार गठनमा भएको ढिलासुस्तीले प्रादेशिक सरकार निर्माणमा समेत प्रभाव परेको बताउनुभएको छ । स्थानीय पासा पुच : र मिसा पुचःद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ स्थित सरस्वतीस्थानमा आज आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले...
राजपा र फोरमवीचको एकता टर्यो, उपेन्द्रको दाउ अर्कै
काठमाडौं, २९ पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालवीच तत्काल एकता नहुने भएको छ । निर्वाचनमा जनताले २ नम्बर प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाउने जनमत दिएपछि हौसिएका यी दुई पार्टीका नेताहरुले तत्काल एकता हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए...
सम्धीलाई प्रदेश प्रमुख सिफारिस, सम्धिनीलाई सांसद
काठमाडौं, २९ पुस । मधेशी राजनीति परिवार मोहले कति गाँजिएको छ भन्ने एउटा उदाहरण राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई हेरे पुग्छ । आफूलाई मधेशी जनताको मसिहा भन्ने मधेशी नेता ठाकुरले दुई नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा आफ्नै सम्धीको...
‘पराजुलीले राजीनामा नदिए फेरि अनसन बस्छु’ : डा. केसी
काठमाडौं, पुस २९ । सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन अन्त्य गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा नदिए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिए । शनिबार अनसन तोडेपछि डा. केसीले निश्पक्ष छानविनका...
बामदेव गौतमलाई अर्को ढोका बन्द
काठमाडौँ, २९ पुस । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अर्को धक्का लागेको छ । बाम गठबन्धनभित्र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने बहस चलिरहेको बेला उनका लागि यो ढोका पनि बन्द भएको छ । नेकपा एमालेको शुक्रबार राजधानीमा बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय...
« 1 … 412 413 414 … 825 »